လငျးယုနျငှကျဟာ နှဈပေါငျးမြားစှာ အသကျရှညျပြံသနျးနိုငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ အသကျ(၄၀) ရောကျတဲ့အခါမှာတော့… – စှယျစုံသုတ
လငျးယုနျငှကျဟာ နှဈပေါငျးမြားစှာ အသကျရှညျပြံသနျးနိုငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ အသကျ(၄၀) ရောကျတဲ့အခါမှာတော့…
လင်းယုန်ငှက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်အရှည်ဆုံး ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသက် ၇၀ အထိ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာအသက်ရှည်ရှည်နေ နိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့အသက် ၄၀ မှာ ခက်ခဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ချကြရပါတယ်။
သူ့အသက် ၄၀ ရောက်တဲ့အခါမှာ သားကောင်ကို ဖမ်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လက်သည်းတွေဟာ စတင်ပျက်စီးလာပါတယ်။ နှုတ်သီးတွေကလည်း ရင်ဘတ်ထိအောင်ရှည်ပြီး ကောက်လာပြီး အတောင်တွေကလည်း အရမ်းလေးလာပါတယ်။ အမွှေးတွေကလည်း အရမ်းထူလာတဲ့အတွက်ပျံရတာလည်း အရမ်းပင်ပန်းလှပါတယ်။
သူ့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်းနေပြီးဘာမှမလုပ်တော့ပဲအသေခံမလား။ နာကျင်ခက်ခဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ဖြတ်သန်းပြီးအသက်ဆက်ရှင်မလား။ မစွန့်စားပဲသေရတာထက်စာရင် စွန့်စားပြီးသေရတာက ပိုမြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် အလွန်မြင့်တဲ့တောင်တခုဆီ ပျံသန်းသွားပြီးအသိုက်တခုတည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ ထပ်မပျံသန်းပဲ အဲဒီမှာပဲနားနားနေပါတယ်။နာကျင်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျော်ဖြတ်ဖို့အစကနေအဆုံးထိ ရက်ပေါင်း ၁၅၀ သို့ နှစ်ဝက်နီးပါးကြာပါတယ်။
ဒီတော့ သူဟာပထမဦးဆုံး သူ့ရဲ့နုတ်သီးကို ကျောက်ဆောင်နဲ့ရိုက်ပြီးဖြုတ်ပြစ်ရပါတယ်။ပြီးတော့ နှုတ်သီးအသစ်ထွက်လာတဲ့အထိ တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရပါတယ်။
နှုတ်သီးအသစ်ထွက်လာတော့ အဲဒီ နှုတ်သီးနဲ့ပဲ ခြေသည်းတွေကို တခုပြီးတခုဆွဲနှုတ်ရပါတယ်။ခြေသည်းအသစ်တွေထွက်လာမှသူ့ရဲ့အတောင်တွေကိုတခုပြီးတခု နှုတ်ပစ်ရပြန်ပါတယ်။
အတောင်ပံအသစ်တွေထွက်လာတော့ သူ့ရဲ့ခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းရတဲ့ရက်ပေါင်းက ၁၅၀ ပါပဲ ။အဲဒီနောက်မှာတော့ လင်းယုန်ငှက်ဟာ သူ့ရဲ့ကျော်ကြားလှတဲ့ ပျံသန်းမှုတွေကို နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ၃၀ မျှပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အသက် ၇၀ ထိ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ (Change) ဆိုတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကိုပြောချင်တာပါ။ တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘဝအသစ်အတွက် ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြရပါတယ်။
ဘဝကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဆက်လက်ဖြတ်သန်းချင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေ။ ထုံးစံတွေကိုလွှင့်ပစ်ရပါလိမ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေကိုလက်ခံချင်စိတ်ရှိတာနဲ့အမျှ အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ရလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစတွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး လှပတဲ့အနာဂတ်အသစ်တွေကို တည်ဆောက်နိုင်ရပါမယ်။
တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ လင်းယုန်ငှက်တောင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို နုတ်ပယ်နိုင်သေးရင် အသိဥာဏ်ရှိတဲ့လူသားတွေကရော ကိုယ့်ကိုယ်ကို (Change) မလုပ်နိုင်ကြဘူးလား? လင်းယုန်ငှက်ဟာ နာကျင်ခက်ခဲစွာပြောင်းရတာပါ။
လူသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က နာကျင်စရာမရှိပဲ “အတွေးအခေါ်အဟောင်း အမူအကျင့်အဟောင်း မကောင်းတဲ့စရိုက်တွေကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ကြဘူးလား။ မပြောင်းလဲနိုင်ကြဘူးလား။ဒီအတိုင်းဆက်သွားမလား ဆိုတာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
လငျးယုနျငှကျဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာအသကျအရှညျဆုံး ငှကျတဈမြိုးဖွဈပွီး အသကျ ၇၀ အထိ အသကျရှငျနထေိုငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ဟာ အသကျရှညျရှညျနနေိုငျဖို့အတှကျ သူတို့ရဲ့အသကျ ၄၀ မှာ ခကျခဲတဲ့ ဖွဈစဉျအတှကျအရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတခုကို ခကြွရပါတယျ။
သူ့အသကျ ၄၀ ရောကျတဲ့အခါမှာ သားကောငျကို ဖမျးဖို့အတှကျသူ့ရဲ့လကျသညျးတှဟော စတငျပကျြစီးလာပါတယျ။ နှုတျသီးတှကေလညျး ရငျဘတျထိအောငျရှညျပွီး ကောကျလာပွီး အတောငျတှကေလညျး အရမျးလေးလာပါတယျ။ အမှေးတှကေလညျး အရမျးထူလာတဲ့အတှကျပြံရတာလညျး အရမျးပငျပနျးလှပါတယျ။
သူ့မှာရှေးခယျြစရာနှဈလမျးပဲရှိပါတယျ။ ဒီအတိုငျးနပွေီးဘာမှမလုပျတော့ပဲအသခေံမလား။ နာကငျြခကျခဲတဲ့ ဖွဈစဉျကို ဖွတျသနျးပွီးအသကျဆကျရှငျမလား။ မစှနျ့စားပဲသရေတာထကျစာရငျ စှနျ့စားပွီးသရေတာက ပိုမွတျပါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့ အလှနျမွငျ့တဲ့တောငျတခုဆီ ပြံသနျးသှားပွီးအသိုကျတခု တညျဆောကျလိုကျပါတယျ ပွီးတော့ ထပျမပြံသနျးပဲ အဲဒီမှာပဲနားနားနပေါတယျ။ နာကငျြခကျခဲတဲ့ဖွဈစဉျကိုကြျောဖွတျဖို့အစကနအေဆုံးထိ ရကျပေါငျး ၁၅၀ သို့ နှဈဝကျနီးပါးကွာပါတယျ။
ဒီတော့ သူဟာပထမဦးဆုံး သူ့ရဲ့နုတျသီးကို ကြောကျဆောငျနဲ့ရိုကျပွီးဖွုတျပွဈရပါတယျ။ပွီးတော့ နှုတျသီးအသဈထှကျလာတဲ့အထိ တိတျဆိတျစှာနဲ့စောငျ့ဆိုငျးနခေဲ့ရပါတယျ။
နှုတျသီးအသဈထှကျလာတော့ အဲဒီ နှုတျသီးနဲ့ပဲ ခွသေညျးတှကေို တခုပွီးတခုဆှဲနှုတျရပါတယျ။ခွသေညျးအသဈတှထှေကျလာမှသူ့ရဲ့အတောငျတှကေိုတခုပွီးတခု နှုတျပဈရပွနျပါတယျ။
အတောငျပံအသဈတှထှေကျလာတော့ သူ့ရဲ့ခကျခဲစှာဖွတျသနျးရတဲ့ရကျပေါငျးက ၁၅၀ ပါပဲ ။အဲဒီနောကျမှာတော့ လငျးယုနျငှကျဟာ သူ့ရဲ့ကြျောကွားလှတဲ့ ပြံသနျးမှုတှကေို နောကျထပျ နှဈပေါငျး ၃၀ မြှပွနျလညျပွုလုပျနိုငျခဲ့ပွီး အသကျ ၇၀ ထိ အသကျရှငျနထေိုငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြကတော့ (Change) ဆိုတဲ့ ပွောငျးလဲမှုကိုပွောခငျြတာပါ။ တခါတရံမှာ ကြှနျတျောတို့ဟာ ဘဝအသဈအတှကျ ခကျခဲတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှခေကြွရပါတယျ။
ဘဝကိုအောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ဆကျလကျဖွတျသနျးခငျြရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့အကငျြ့ဆိုးတှေ။ ထုံးစံတှကေို လှငျ့ပဈရပါလိမျမယျကြှနျတျောတို့ဟာ အ တှေးအချေါအသဈတှကေိုလကျခံခငျြစိတျရှိတာနဲ့အမြှ အတှေးချေါဟောငျးတှကေိုစှနျ့ပဈရလိမျ့မယျ။ကိုယျ့ရဲ့အစှမျးအစတှေ ဖျောထုတျနိုငျပွီး လှပတဲ့အနာဂတျအသဈတှကေို တညျဆောကျနိုငျရပါမယျ။
တိရိစ်ဆာနျဖွဈတဲ့ လငျးယုနျငှကျတောငျသူ့ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ မလိုလားအပျတဲ့ အင်ျဂါအစိတျအပိုငျးကို နုတျပယျနိုငျသေးရငျ အသိဥာဏျရှိတဲ့လူသားတှကေရော ကိုယျ့ကိုယျကို (Change) မလုပျနိုငျကွဘူးလား? လငျးယုနျငှကျဟာ နာကငျြခကျခဲစှာပွောငျးရတာပါ။
လူသားတှဖွေဈတဲ့ကြှနျတျောတို့က နာကငျြစရာမရှိပဲ “အတှေးအချေါအဟောငျး အမူအကငျြ့အဟောငျး မကောငျးတဲ့စရိုကျတှကေိုမစှနျ့လှတျနိုငျကွဘူးလား။ မပွောငျးလဲနိုငျကွဘူးလား။ဒီအတိုငျးဆကျသှားမလား ဆိုတာ စဉျးစားစခေငျြပါတယျ။